INelson Mandela Foundation ithi uZuma kumele ahambe | News24
INelson Mandela Foundation ithi uZuma kumele ahambe
Johannesburg – UMengameli Jacob Zuma usebahlukumeze kakhulu abantu bakuleli abebemethemba ngakho kumele ahambe njengamanje, kusho iNelson Mandela Foundation ngoLwesibili.
"Kumele ahambe ngoba usekutshengisile ukuthi akakwazi ukuphatha. Sinxusa uhulumeni ukuba umenze ayimele yonke into ake ayenza ngaphambilini. Ezinye izinto azixoleleki," kusho le nhlamgano ngesitatimende.
Le nhlangano imile kwelokhu uZuma kumele ashenxe ukuze kufike ukhetho luka-2019 inhlangano ebusayo isibuyelwe yithemba.
"Sekuphele izinyanga ezingu-14 iNelson Mandela Foundation yaphakamisa okokuqala ukuthi uMengameli Zuma kumele asule esikhundleni. Manje sekufike esikhathini lapho abantu bakuleli bengasakwazi ukumbekezelela khona."
OLUNYE UDABA: Amaqembu aphikisayo akwamukele ukuhlehliswa kwe-SONA
Le nhlangano ithi ibilokhu ebukele, kusukela ngoDisemba, kuvuleka amagomagoma obufakazi.
"Izigcawu, uphenyo, amakhomishini kanye nezinye izinhlobo zokuvula izifuba kuhlinzeke ngobufakazi obutshengisa ukudliwa kwezimali yizinhlaka ezidlelana noZuma.
"UZuma ulibhekisele phansi izwe uNelson Mandela ayeliphupha ngesikhathi ethatha igxathu lakhe lokuqala lenkululeko eminyakeni engu-28 eyedlule," isho.
Le nhlangano iphinde yayishayela ihlombe imizamo eyenziwe wuKhongolose nohulumeni ekulwisaneni nenkohlakalo.